> Resource > Apps > Sida loo rakib Apps ku doonayay oo HTC
Dhawaan helay doonayay oo brand-cusub HTC ah, oo aan la sugi karin in ay soo baxdo iyo rakibi barnaamijyadooda aad jeceshahay on doonistaadu HTC? Si aad wax si fudud u samayn sameeyo, waxaad isku dayi kartaa desktop tababare awood leh Android magacaabay Wondershare MobileGo for Android (dadka isticmaala Windows) ama Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) . Tababaraha Tani waxay kuu ogolaanaysaa inaad Android ay helaan soo baxdo iyo rakibi barnaamijyadooda kulul ka Google Play Store, AppBrain, iyo website-yada kale app.
Download Tababaraha this android si loo soo dajiyo APK ku doonayay oo HTC.
Fiiro gaar ah: Labada qeybood oo waa kuu diyaar u ah. Just dooro version saxda ah. Qaybta hoose ayaa kuu sheegayaa sida loo soo dajiyo barnaamijyadooda ku doonayay oo HTC la version Windows ah. The version Mac shaqaysaa si la mid ah.
Hab fudud si loo soo dajiyo barnaamijyadooda ku doonayay oo HTC
First of dhan, rakibi MobileGo for Android kombiyuutarka. Waxaa Launch inay soo qaadaan suuqa kala xiriir shaashadda kombiyuutarka.
Tallaabada 1. Isku doonistaadu HTC in kombiyuutarka
Sida dadka isticmaala Windows, aad loo ogol yahay in ay ku xidhmaan doonayay oo HTC in ay kombiyuutarka via Wi-Fi ama adigoo isticmaalaya cable USB ah. Haddii aad jeceshahay WiFi, idinku waajib ah inaad si ugu horeysay soo bixi Mobile Tag. APK fayl oo ku xidh on doonistaadu HTC. Ka dib markii aan ogaanno waxay doonistaadu HTC, software MobileGo for Android waxaa muujin doonaa in ay suuqa kala weyn.
Tallaabada 2. Wixii la doonayay oo HTC rakibtay Chine
Qaabka ugu dhakhsaha badan si loo soo dajiyo barnaamijyadooda ku helaysaan waxaad dalabtaan HTC waa in guji "rakib Apps" on line hoose ee suuqa kala hoose. Daaqadda file browser muuqda, kombiyuutarka si aad u ogaato sida aad doonayso inaad barnaamijyadooda dhirtuba. Guji "Open" si ay u soo dajiyo sii sheegay xiisaha iyo HTC.
Ama, waxaad ku rakibi karo barnaamijyadooda wax u doonaya HTC aad sidan. Tag "Apps" galeeysid ka tagay. Daaqadda app, guji "rakib" on line ugu sareeya. Markaas, falgali in meesha aad ku badbaadi lahaayeen barnaamijyadooda. Markaas, doortaan barnaamijyadooda aad doonayay oo iyaga loo soo dajiyo sii sheegay xiisaha iyo HTC.
Ka sokow ku rakibidda barnaamijyadooda badbaadiyey kombiyuutarka, aad awood u duuban oo si toos ah rakibidda barnaamijyadooda.
By gujinaya "Google Play Apps", waxaad ka heli suuqa kala google dukaanka play. Raadi barnaamijyadooda aad jeceshahay oo guji "rakib" in ay soo baxdo iyo rakibi barnaamijyadooda ku helaysaan waxaad dalabtaan HTC. Ugu geeska bidix ee ugu hooseysa, guji "Downloads" si uu u hubiyo habka dajinta.
Fiiro gaar ah: By gujinaya iskutallaabta, waxaad ku dari kartaa website kasta oo app in column ka tagay. Markaas, waxaad kala soo bixi kartaa oo rakibi barnaamijyadooda ka. Haddii aad isticmaasho version Mac ah, ma tahay in aad loo ogol yahay in ay soo bixi barnaamijyadooda ka Play Googple iyo website-yada kale in muddo ah.
Tutorial video wuxuu kuu sheegayaa sida loo rakibi Chine ee la doonayay oo la HTC
Isku day inaad kala soo baxdo MobileGo for Android barnaamijyadooda ku doonayay oo HTC hadda!